Sidekick: Web Browser ho an'ny traikefa an-tserasera tsaratsara kokoa | Avy amin'ny Linux
Araka ny efa fantatsika tsara, isika rehetra izay matetika mampiasa solosaina, ny Web browser azo jerena mora foana ny fampiharana be mpampiasa indrindra saika misy Operating System zava-dehibe. Ary eo anilany azo antoka izany, Office Suites, ny Mpijery rakitra (rakitra) ary ny Fampiharana hafatra eo noho eo.
Ary noho izany dia matetika izahay no mandefa momba ny tranonkala iray manokana, na vaovao io na noho ny fanavaozana navoaka. Ary amin'ity famoahana ankehitriny ity dia anjaran'ny Sidekick, mpizaha tranonkala iray mahaliana izay mampanantena tontolo iray haingana sy mahomby ho an'ny a tsaratsara kokoa amin'ny traikefa an-tserasera sy fiaraha-miasa.
Alohan'ny hidiranao amin'ilay raharaha, dia tadidio fa ankoatra an'ity vaovao ity Browser Sidekick, misy endrika maro hafa na tsia, izay mety ho an'ny Desktops (GUI) na Terminals (CLI), ary samy manana ny azy ireo Tombony Manimba amin'ny lafiny samihafa izay mety ilaina amin'ny hafa karazana mpampiasa / filàna, toy ny:
Ireo no malaza sy manan-danja indrindra, noho izany azo antoka fa maro hafa ary ireo vaovao dia mbola hiseho ihany rehefa mandeha ny fotoana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ianao dia azo antoka fa hanana lahatsoratra teo aloha tsara ho an'ny maro amin'izy ireo izay manasa anao izahay hitady sy hamaky, toy izao manaraka izao:
Waterox: mpitety tranonkala maimaimpoana maimaimpoana ary malalaka
1 Sidekick: mpizaha tranonkala iray mifantoka amin'ny fiasana amin'ny Internet
1.1 Inona ny Browser Sidekick?
1.2 Fametrahana sy fanamafisana Sidekick
Sidekick: mpizaha tranonkala iray mifantoka amin'ny fiasana amin'ny Internet
Inona ny Browser Sidekick?
"Sidekick dia rafitra fiasa miasa vaovao miorina amin'ny browser Chromium. Natao ho traikefa farany amin'ny asa an-tserasera, mitondra ny ekipanao sy ny fitaovanao Internet rehetra ampiarahinao ao anaty interface iray."
Ary ho an'izay, fampanantena mampihena na manafoana ny fampiasana tafahoatra ny vakizoro na ny fikandrana fitetezana na rindranasa amin'ny birao, izay matetika mirona tsy hifangaro tsara amin'ny sisa amin'ny hetsika isan'andro ataon'ny mpampiasa mahazatra, ambonin'izay rehetra natao tao anaty tranokala.
Ankoatra izany, Misongadina i Sidekick noho ireo fiasa manaraka:
Fanakanana ny Trackers: Satria tsy manana maodely ara-barotra miorina amin'ny dokam-barotra izy ireo, ka manakana ny doka sy ny mpanaraka tsy misy marimaritra iraisana.
Fampiatoana ny lash miorina amin'ny AI: Satria mamonjy izay ilaina ao amin'ny fitadidiana izy, mampiato avy hatrany ny takelaka izay tsy ilain'ny mpampiasa amin'ny fotoana iray.
Fanatsarana fitantanana fahatsiarovana ireo kiheba: Satria tsy dia mitadidy firy izy io rehefa miasa miaraka amin'ireo kiheba.
Fametrahana sy fanamafisana Sidekick
Aorian'ny fisintomana azy, avy amin'ny fizarana fisintomana ofisialyary ao endrika ".deb", ho an'ny tranga manokana ananako, satria, ampiasaiko MX Linux 19, Mila apetraka fotsiny ao amin'ny folder aho "Download" mampiasa ity baiko manaraka ity:
Ary avy eo azonao atao ny manokatra azy, izay mampiseho ireto manaraka ireto dingana fanamboarana hanohy hamita ny fizotry ny fametrahana manontolo:
Raha fintinina ary araka ny hita dia fampiharana izany tena mahaliana miankina amin'ny Chromium, ary noforonina hanolotra traikefa tsara sy haingana kokoa rehefa miasa amin'ny a Web browser. Amin'ny tranga manokana, fenoy ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny kaody voaray amin'ny mailaka fa tsy miditra mivantana miaraka aminy. Ary toa ahy izany mandanjalanja ny fihinanana fahatsiarovanao (2,9% an'ny RAM-ko mifanohitra amin'ny 5.2% an'ny Firefox) ary tena tsara sy azo ampiharina Webapps amin'ny fomba Opera namboarina, izany hoe eo amin'ny sisiny ankavia.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny tranokala antsoina hoe «Sidekick» izay mampanantena tontolo iray haingana sy mahomby ho an'ny traikefa asa an-tserasera sy fiaraha-miasa tsara kokoa; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Sidekick: mpitety tranonkala hahazoana traikefa amin'ny asa an-tserasera tsara kokoa
Bertie dia hoy izy:
Niditra tao amin'ny pejy SIdekick aho ary toa tsy rindrambaiko maimaimpoana io, na loharano misokatra aza ...
Tsara fa tetikasa ara-barotra izy io ary resahina eto, fa tokony hofaritana ao amin'ny lahatsoratra izany antsipiriany izany, ahoana ny hevitrao?
Valiny tamin'i Bertie
Miarahaba, Bertie. Misaotra tamin'ny hevitrao. Tsy azoko tao amin'ny tranonkalanao ireo teny hoe "Rindrambaiko Maimaimpoana sy loharano misokatra", na izany aza, nieritreritra aho fa loharano misokatra tanteraka na amin'ny ampahany i Sidekick, satria mifototra amin'ny Chromium, izay ny kinova open source an'ny Google Chrome.
Diego (hafa) dia hoy izy:
Mila manomboka ny fisoratana anarana izany raha te hampiasa azy ... nanomboka tamin'ny fanombohana ratsy isika tamin'ny resaka fiainana manokana. Raha ampianay ao amin'i Blink "miantso an-trano" mba hilaza amin'i Google ny zavatra nataontsika nandritra ny fotoam-pivoriana, raha tsy misy fanaraha-maso mety na faran'izay kely tsy mora avy amin'ny mpampiasa, dia tsy mahazo antoka aho.
Oh, ary ny fiasan'ny fisintomana ny RAM avy amin'ny vakizoro tsy ampiasaina dia tratra miaraka amin'ny fanampim-panazavana tsotra antsoina hoe Auto Tab Discard:
Valiny tamin'i Diego (hafa)
Miarahaba, Diego. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara tsara avy amin'ny zavatra niainanao manokana. Izaho manokana dia mbola mampiasa Firefox ihany rehefa avy nanandrana mpitety maro.
Ny processeur vaovao RISC-V dia mitaky ny fahombiazan'ny firaketana isaky ny watt